အဲန်ပီပီ ခေါ် မရာမျိုးနွယ်စု ကိုယ်စားပြု ပါတီတရပ် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန် ဆုံးဖြတ် | Home
« ကြံ.ဖွံ့ အတွက် မဲဆွယ်စည်းရုံးပေးမည့် ပြည်သူ့ စစ် မွမ်းမံ သင်တန်းပြုလုပ်
အမတ်လောင်းအဖြစ်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းမပြုရန် ဦးနိုးထန်ကပ်ကို ပါတီခေါင်းဆောင် တချို့က တောင်းဆို »
အဲန်ပီပီ ခေါ် မရာမျိုးနွယ်စု ကိုယ်စားပြု ပါတီတရပ် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန် ဆုံးဖြတ်
May 1, 2012 by khonumthungburmese ၂၆ ဧပြီလ ၂၀၁၀၊ ချင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ မရာမျိုးနွယ်စုကိုယ်စားပြုရပ်တည်မည့် Nationalities Progressive Party ( NPP) ပါတီက ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ တွင် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ရန် ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလ ဒုတိယပတ်က ဆုံးဖြတ်ကြသည် ဟု သိရသည်။
ယင်းဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချင်းပြည်နယ်မတူပီမြို့နယ်၊ လိုင်လင်းပီရွာတွင် ဧပြီလ ၁ဝ – ၁၃ ရက်အတွင်း မရာလူထု ၁ဝဝ ခန့်ဆွေးနွေးတိုင်း ပင်ကြပြီးနောက် အဲန်ပီပီခေါ် နိုင်ငံရေးပါတီအမည်ဖြင့် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
“အဲန်ပီပီ နာမည်နှင့် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရေး၊ တသီးပုဂ္ဂလနဲ. ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရေး အဆိုနှစ်ခုကို မဲခွဲ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပြီးမှ ယခုလို အဲန်ပီပီနာမည်ကို ရွေးချယ်တာဖြစ်တယ် ”ဟု ယင်းဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက် သူ ဒေသခံကျောင်းဆရာ တဦးက ပြောသည်။
အဲန်ပီပီပါတီကို ဦးဆောင်ရန်အတွက် အဖွဲ့ဝင် ၁၅ ဦးအား လောလောဆယ် ရွေးချယ်ခဲ့ကြ ကြောင်း၊ အသေးစိပ်ကို အဲန်ပီပီ တရားဝင်ဖွဲ့ စည်းခွင့်ရပြီးမှသာ သိရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ကြောင်း သူကဆက်ပြေသည်။
“ဥက္ကဌ တဦး နှင့် အဖွဲ့ဝင် ၁၄ ဦးကို လောလောဆယ်ရွေးချယ်ထားတယ်၊ အခု အဲန်ပီပီ ကို မှတ်ပုံတင် ရန် ကိုယ်စားလှယ် နှစ်ဦးစေလွှတ် ထားတယ်၊ အဲဒီပြီးမှ ညီလာခံ တရပ်ခေါ်ယူ ပြီး အ သေးစိပ်ကို လုပ်ဆောင်သွားမည် ” ဟု အဆိုပါကျောင်းဆရာက ဆက်လက်ပြောပြ သည်။
အဲန်ပီပီသည် မရာမျိုးနွယ်စုများနေထိုင်သည့်ဒေသများတွင် အနည်းဆုံး မဲဆန္ဒနယ်သုံးနယ် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်သွားကြမည်ဖြစ်သည်။
နအဖစစ်အစိုးရကျင်းပပြုလုပ်မည့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရန် ချင်းနိုင်ငံရေးပါတီ သုံးခုဖြစ်သည့် Chin National Party, Chin Progressive Party, Mro or Khumi National Solidarity Organization တို.က ရွေးကောက်ပွဲကော်မီရှင်သို. ပါတီမှတ်ပုံ တင်ထားပြီးဖြစ်သည်။